Xildhibaan Qoone “Wax ay reer Hiiraan raalli ka yihiin ma ahan in la celiyo Danjire Ameeriko” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 17 August 2015
Xildhibaan Maxamed Xasan Qoone oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya, kana soo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dib u celintii lagu sameeyay Danjirihii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeriko, xilli uu doonayay inuu gudaha u galo.
Ciidamo ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa ku celiyay duleedka magaalada Beledweyn, kadib amar ka soo baxay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax oo loogu diiday Mr Ameeriko inuu gudaha u galo magaalada Beledweyn.
Xildhibaan Qoone ayaa sheegay inay raalli gelin ka bixinayaan gefkaas, isla markaana dhamaan dadka reer Hiiraan ay aad uga xun yihiin.
“Waxaan aad uga xumahay tallaabada lagu sameeyay Danjirihii hore Maxamed Cali Ameeriko, waa wax aysan reer Hiiraan raalli ka aheyn, waxaas wax sameyn kara waa cid aan waxgarad aheyn, waa muwaadin soomaaliyeed dhulkiisa hooyo iyo deegaankiisa inuu galo in loo diido wax aan raalli ka nahay ma ahan”ayuu yiri Xildhibaan Qoone.
Mr Ameeriko ayaa safar dhulka ah kaga yimid dhanka degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, waxaana markii uu soo gaaray duleedka Beledweyn soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Hiiraan, hase ahaatee Guddoomiyaha Gobolka oo Muqdisho ku sugan ayaa amar ku bixiyay in aanu soo geli karin magaalada, iyadoo aan sababta ka dambeysa in dib loo celiyo.
Danjire Cali Ameeriko ayaa socdaal nabadeed maalmihii u dambeeyay ku marayay gobolada dalka qaarkood, isagoo soo maray magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo, Garowe, Boosaaso, Galkacyo, Cadaado, Dhuusa Mareeb iyo Guriceel.
Ciidamada Ethiopia oo lagu eedeeyay in Maamullo ay u sameeyaan deegaanada lagala wareego Al Shabaab